Imizi emihlanu yaseYurophu yokubalekela | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Amadolobha, Izindlela zokuphunyuka, Ukuphunyuka eYurophu, Impelasonto
Uma sifushane ngesikhathi, siyathanda ukuhlela ukubaleka. Kunamakhulu amasayithi esingakaze siwabone futhi esingathanda ukuwajabulela, ngakho-ke sizokukhombisa Amadolobha ase-Europe ukuzwa lokho kuphunyuka okulindelwe isikhathi eside. Kulezi zindawo sizothola amadolobha athakazelisayo angavakashelwa ngohambo lokubaleka oluncane, nokuyinto ebalulekile.
Uma sizohlela i- ukubaleka ngempelasontoKumele kube yidolobha elisivumela ukuthi sibone amaphuzu alo abaluleke kakhulu ngaphandle kokusishiya noma yini ebesingathanda ukukubona. Le mizi kanye neminye eminingi yaseYurophu iyindlela enhle yokunqamula impelasonto emfushane ngokugcwele.
1 ILyon, eFrance
2 I-Prague, Czech Republic
3 IBordeaux, eFrance
4 IDublin, e-Ireland
5 ILisboa, ePortugal
ILyon ingelinye lama- amadolobha abaluleke kakhulu eFrance. Hhayi iParis, kunjalo, kepha ngokunembile ngenxa yalesi sizathu ilungele ikhefu elifushane. ELyon kukhona ukuvakasha okubalulekile okungafanele kuphuthelwe, njengeLumiere Museum, lapho okusungulwe okuholele ekubukekeni kwesinema cinema kutholakala. ISaint Jean Cathedral ngenye indawo evelele, isonto lombhishobhi elixuba izitayela zamaRoma nezamaGothic, lapho iwashi lezinkanyezi ligqama ngaphezu kwakho konke, okusitshela isikhathi, kepha futhi nendawo yezinkanyezi noma ilanga phezu kweLyon. Ungabona futhi okwedlule kwamaRoma ezinsaleleni zemivubukulo zaseLa Fourvière, neMuseum Museum yaseGallo-Roman.
IPrague ingelinye lalezo zindawo zaseYurophu ezinqoba abantu abaningi emhlabeni jikelele. Idolobha elinomlando futhi eligcinwe kahle kakhulu, lapho singabona khona izikhala ezahlukahlukene ezizosishiya sinambitheke kahle emilonyeni yethu. I- Ibhuloho likaCarlos Ingenye yezindawo ezithwetshulwe kakhulu edolobheni, futhi iwela umfula oxhumanisa isifunda saseMalá Strana neDolobha Elidala. Ukuhamba kuyo ngenkathi uthatha izithombe zokubukwa kuyinto yakudala. E-Old Town singabona isikwele esimaphakathi lapho ukwakhiwa kwehholo ledolobha kutholakala newashi elidumile lasePrague lezinkanyezi. Ukuvakashela ePrague castle yinde, ngakho-ke kuzofanele sinikele ngesikhathi, ngoba iyinqaba enkulu yangenkathi ephakathi emhlabeni.
Siya futhi eFrance, edolobheni elingavakashelwa buthule ngempelasonto. Sikhuluma ngeBordeaux, inhlokodolobha yesifunda sase-Aquitaine. I- Indawo de la Bourse Yindawo efanekisela kakhulu kuleli dolobha, futhi kuyisikwele lapho singabona khona izakhiwo ezinhle ezibonakala esibukweni samanzi esakhiwe ngokungeyena. Isimo sangempela esenze lesi sikwele saziwa emhlabeni wonke ngezithombe ezinhle ezithathiwe. Kepha eBordeaux kunokunye okuningi, kusukela endlini lapho uGoya ayehlala khona kuze kufike embhoshongweni wasePey Berland, lapho ungabona khona lonke idolobha ngendlela ye-panoramic. Ngokuvamile, iBordeaux yidolobha eligcinwe kahle, elinedolobha elidala elihle kakhulu okufanele lilahleke ngokungenanjongo.
I-Dublin idolobha eline- isikhungo esinempilo kakhulu, futhi kunezikhala eziluhlaza okuseduze, ngakho-ke inakho konke okuhle futhi inikeza izivakashi inani elifanele lokuxokozela nokuphithizela. Umgwaqo weTemple Bar ungenye yezidume kakhulu, futhi ngukuthi kunomoya kuwo wonke amahora, nabantu abasuka enkantini baye ezinkantini bezonambitha ubhiya ne-wishky. Kepha kuleli dolobha kukhona okuningi ongakubona, njengokuvakashela eGuinness Storehouse, lapho singanambitha khona ubhiya odume kakhulu e-Ireland futhi sibone umlando wawo kuwo wonke amakhulukhulu eminyaka, noma ukuvakashela amasiko eTrinity College, eyunivesithi endala kunazo zonke I-Ireland, izincoma ngomtapo wolwazi omangalisayo
ILisbon, inhloko-dolobha yasePortugal, iqinisekisa ngokuhlangana kwayo phakathi kwesimanjemanje nedolobha lakhona elidala, eligcina konke okuhle kwalo. I- Ibhuloho ngo-Ephreli 25 Ingesinye sezigcawu ezivelele kakhulu, futhi yibhuloho lokumiswa elide kunazo zonke kulo lonke elaseYurophu. ILisbon inokuningi engakunikeza izivakashi, kusuka ku-gastronomy enhle kuya kufado yayo edumile nezikhumbuzo. ITorre de Belem ethekwini lomfula iTagus, umbhoshongo wasendulo wokuzivikela wobuhle obukhulu, noma iCastle of São Jorge noma iCathedral yaseLisbon. Eceleni kweTorre de Belém kuneSigodlo Sezindela iJerónimos, indawo lapho kungcwatshwa khona uVasco de Gama kanye nesikhala esithandekayo esontweni laso. Kufanele uhambe nakuma-tram ayo aphuzi aphuzi, agudla ezinye izingxenye zedolobha, bese ukhuphukela eChiado naseBarrio Alto esikhesheni saseSanta Justa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Amadolobha ama-5 aseYurophu abalekela
Kubukeka njengokukhetha okuhle kimi, ngakho-ke uma iParis ingeyami enye yezinketho ezinhle kakhulu.
Sikunikeza i-push encane oyidingayo ukuhamba ngaphezulu
Izinto okufanele uzenze eSan Francisco